787-800 inkinga iphakethe mega.
Umbuzo 787-800 inkinga iphakethe mega.
unyaka 1 8 edlule #632 by ricsmi
Sawubona konke, ngiye muva nje iqale ukudlala FSX SE futhi ejabulela ngempela.
Ngiye efakwe nje TDS 787-800 iphakethe mega and inkinga kuphela i babe nalo wukuthi ayikho inkinobho abanikeze asebenza nabo kanye namasumpa ukusebenza VC, mina fly zonke izindiza zami VC futhi lokhu ukubulala le izindiza mina njengoba i ungeme abanikeze asebenza nabo 2d.
Noma yimuphi imibono guys?
unyaka 1 8 edlule #633 by Gh0stRider203
kahle kusukela kungcono 2 injini inyoni, sengiyazi ngempela we-VC ungasebenzisa. uzodinga ukulanda endizeni ezengeziwe, kodwa kuyoba kunomvuzo
lokhu uzobonisa indlela ushintshashintsha out VC
VC e lena kunalokho mnandi. Angazi ngempela ukuyisebenzisa kodwa ukusebenza
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: ricsmi
unyaka 1 8 edlule #634 by ricsmi
sibonga Ok ngizobuya sibheke, ngikutholile enye inkinga, i kuphela waphawula ukuthi phezu umbono Ingaphandle kukhona pusher iloli elikhulu exhunywe indiza.
Kanjani i ayibulale ukuthi njengoba kubukeka silly kanye nje clip endleleni okuzenzakalelayo omunye.
unyaka 1 8 edlule #635 by Gh0stRider203
kuqala VC, NOW stowaways? kubonakala sengathi awukwazi ukubamba ikhefu! LOL
ukuthi Angiqiniseki mayelana, ngokwethembeka. Angazi fly 787 (the 772LR has umthamo kangcono futhi ububanzi). Into KUPHELA mina angaphakamisa kuyinto bheka ngaphansi panel ukubona uma kukhona iwindi Umbuso indawo. Ngiyazi abanye izinyoni Project Vula Sky ube ukuthi.
unyaka 1 8 edlule #640 by ricsmi
Ngemva kokufunda ngokusebenzisa engifundela ke uthi kukhona iphaneli Umfelandawonye ukuthi ungakwazi ukuvala nethonya amajaji engabe bonisa ngemuva ngokucindezela ctrl + 7 kodwa Isnt ukusebenza noma.
Noma yimuphi imibono gents?
Isikhathi ukudala page: 0.711 imizuzwana